Keep It Casual : Weekend Wear Chic for Busy Petties – 𝐀𝐫𝐢𝐞𝐥'𝐬 𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞
Casual Doesn’t have to mean untidy , unflattering or unfashionable.
အခုစာသားလေးကတော့ Casual Wear ကို Thi တို့တွေ လွယ်လွယ်ခေါ်တက်ကြတဲ့ အင်္ကျီ အခေါ်ဝေါ်တစ်ခုလို့ ပြောရမှာပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အမျိုးစားပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ။ လွယ်လွယ်ကူကူ ဝတ်လိုရတဲ့ Type လို့ ပြောရမှာပါ။ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ လွတ်လက်ပေါ့ပါးနေတဲ့ Active ဖြစ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ Look ကို ရစေပါတယ် ။ Casual Wear ကို မှ Chic Looks ရဲ့ ရသနဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ အရမိးကို Vogue/ Stylish ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ Confident ကို ပေးနေနဲ့ Outfit ပါဘဲ ။
Casual Wear ကိုတော့ အများဆုံးလူတွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ Clothing Type ပါ။ Office Wear ဖြစ်ဖြစ်|အိမိနေရင်းဝတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ၊ Shopping ထွက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ကြရင်ဖြစ်ဖြစ် ၊ တစ်ခါတစ်လေဆို Date ရင်တောင် ဝတ်တက်ကြတဲ့ အမျိုးအစား Clothing Type ပါ။ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ Common ဖြစ်တဲ့ အမျိုးစားပါ။
Casual Wear ကို Fashionable မကျဘူး ၊ Stylish မဖြစ်ဘူး လို့ ပြောတက်ကြပါတယ်။
“ Dress Down “ Strike fear !!!
အဲ့လိုလဲ မထင်ပါနဲ့ ။ မဟုတ်ပါဘူး။ Casual Wear ကို Fashionable Looks ဖြစ်အောင် ဝတ်လို့ရပါတယ် ။ Casual Wear ထဲမှာမှ Style Type တွေနဲ့ Body Type အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲ အများကြီး type တွေ ကွဲပါသေးတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Petites Lady လေးတွေ အတွက် Chic Urban Casual Wear အမျိုးအစားကို ရွေးပြီတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲ့တော့ Urban Fashion တွေရဲ့ Casual Chic Looks လေးတွေကို အောက်မှာ လေ့လာလို့ရအောင် ထည့်ပေးထားပါတယ် ။
Previous Dolce And Gabbana; Patchwork Collection
Next Disney Fairy Tale Wedding Collection of Allure Bridal…..
1 thought on “Keep It Casual : Weekend Wear Chic for Busy Petties”